Reggae on! Fiarovana ny fizahan-tany ao Jamaika na dia misy aza ny lalàna mifehy ny tsy fahazoana mivezivezy vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Reggae on! Fiarovana ny fizahan-tany ao Jamaika na dia misy aza ny lalàna mifehy ny tsy fahazoana mivezivezy vaovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Miaraka amin'ireo toeram-pialan-tsasatra rehetra azo antoka indrindra eto an-tany toa ny vondrona Sandals and Beaches, antenaina hitombo hatrany ny fizahan-tany any Jamaika na eo aza ny lalàna mifehy ny tsy fahazoana maminany vaovao nambaran'ny praiminisitra Jamaikana Michael Holness androany.
Raha ampitahaina amin'i Etazonia ny fiparitahan'ny COVID-19, isan'ny maty dia salama tsara i Jamaica. Ny isan'ny mponina isaina tapitrisa i Jamaika dia eo amin'ny laharana faha-123 manerantany, raha oharina amin'ny laharana faha-14 any Etazonia.
Jamaica dia nitantana farafaharatsiny 369,960 fatra vaksinin'ny COVID hatreto. Raha heverina fa mila fatra 2 ny olona tsirairay, dia ampy hanaovana vaksiny 6.3% ny mponina ao amin'ny firenena. Ity dia isa ambany raha oharina amin'ny taha 50% mahery ho an'i Etazonia.
Nandritra ny herinandro lasa izay dia nitatitra fa salanisa i Jamaika Dosis 4,933 notanterahina isan'andro. Amin'izay taha izay dia mbola hitohy hatrany 120 andro mba hitantanana fatra ampy ho an'ny 10% amin'ny mponina.
Raha mbola misokatra ny sisintany amin'izao fotoana izao, ary miverina eto amin'ity firenena Nosy Karaiba ity ny fizahan-tany, dia napetraka ny curfew vaovao nanomboka ny 11 Aogositra hatramin'ny 31 Aogositra.
Na dia mampivarahontsana azy aza izany, dia mety tsy ho fahasamihafana lehibe ho an'ireo mpitsidika mankafy fialan-tsasatra ao Jamaika any amin'ireo toeram-pandraisana vahiny toa an'i kapa, saingy fampitandremana mazava avy amin'ny praiminisitra Jamaica Michael Holness, fa ny fandrahonana COVID-19 dia tena izy ary efa voavaha.
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia manentana ny Amerikanina manao vakansy any Jamaika mba hanao vaksiny tanteraka alohan'ny dia.
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina (CDC) dia namoaka fahasalamana momba ny dia 3 Filazana ho an'i Jamaika noho ny COVID-19, manondro haavon'ny COVID-19 avo lenta ao amin'ny firenena. Hoy izy: “Ny mety ho tratran'ny COVID-19 sy ny soritr'aretina mahery vaika dia mety ho ambany kokoa raha vaksinina feno amin'ny Vaksinin'ny FDA nahazo alalana. "
Androany dia nanambara ny praiminisitra Covid-19 nohavaozina araka ny lalàna mifehy ny loza voajanahary ny praiminisitra jamaica Andrew Holness.
Niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety dizitaly androany, nilaza i Holness fa hampiharina mandritra ny telo herinandro ny fepetra vaovao manomboka ny alarobia 11 aogositra hatramin'ny 31 aogositra.
Nambarany fa manomboka amin'ny 11 Aogositra, ny ora tsy tokony hitsaharana amin'ny alina dia hanomboka amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina manomboka ny Alatsinainy ka hatramin'ny Zoma.
# Fanambadiana - Tsy mihoatra ny 50 ny olona mahazo alalana hanatrika fampakaram-bady.
Ho an'ny fivoriana ankapobeny isan-taona sy tsy manam-paharoa an'ny fikambanana, ny isan'ireo olona avela hanatrika ara-batana dia 50. pic.twitter.com/So7oDMOCUe
- Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) Aogositra 10, 2021
Ny asabotsy dia manomboka amin'ny 6 hariva ka hatramin'ny 5 maraina ny ora tsy hitsaharana ny ampitson'iny, fa ny alahady kosa dia manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 maraina ny tsy fahazoana mivoaka ny ampitso.
Ny orinasa dia takiana mba hanidy adiny iray alohan'ny fotoam-pitaterana.
Hisy fepetra hafa ambaran'ny praiminisitra amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny alakamisy lasa teo, ny isan'ny tranga COVID-19 isan'andro dia nihoatra ny 200, ary nandritra ny telo andro dia nitombo hatramin'ny 300 ny tranga. Ny hopitaly koa dia iharan'ny tsindry satria voafetra ny toerana fandriana.
Talohan'izay dia nandoko ny sary manjavozavo momba ny toe-draharaha COVID-19 any Jamaika i Holness tamin'ny filazany fa trangana virus 1,903 vaovao no voarakitra teo anelanelan'ny 1 Aogositra sy 8 Aogositra.
Vokatr'izany dia tranga 238 COVID no voarakitra antonony isan'andro.
Ny fahamasinana dia nanome tsiny ny fisondrotan'ireo Jamaikana tsy nifikitra tamin'ny kaonty COVID-19, anisan'izany ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny fankatoavana ireo fepetra takiana amin'ny curfew.
"Ity karazana fihetsika ity dia hitarika fiakaran'ny tranga," hoy izy, ary nanamarika fa ny governemanta dia nandrasana ny fiakaran'ny tranga, ka nahatonga ny fanamafisana ny fepetra fitehirizana virus.
eTurboNews nanatona an'i Hon. Minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett ho an'ny fanazavana, saingy tsy nahazo valiny, ary hanavao indray raha fantatra indray.
Tsy misy olona azo antoka mandra-pahatongantsika rehetra dia tsy ny fanombanana ataon'ny filoham-pirenena amerikana Biden ihany, fa koa avy amin'i Edmund Bartlett, minisitry ny fizahantany any Jamaika. Mino mafy izy fa ny fitsinjarana ny vaksininy manerantany amin'ny tsirairay no lakileny. Andriamatoa Bartlett dia niady ho an'ny mahantra amin'ny firenena manokana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany, toa an'i Jamaika amin'ny tsy fahafahany mampitombo ny fizarana vaksininy.
Ny Andriamatoa Andrew Michael Holness nohajaina voalohany dia voafidy ho mpikambana ao amin'ny Parlemanta (MP) hisolo tena ny Vondrom-paritry ny West Central St. Andrew tamin'ny 1997, tamin'ny faha-25 taonany. Ny praiminisitra taorian'ny antoko antoko miasa ao Jamaika dia nandresy ny Antokom-pirenen'ny vahoaka tamin'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny 25 Febroary 2016.